यात्रुलाई अलपत्र छाडेर पानीजहाजबाटै हाम फाले क्याप्टेन: तर पनि संसारले गर्यो प्रशंसा, यस्तो छ कारण – live 60media
एजेन्सी । यात्राका क्रममा सवारी चलाउने चालकको हातमा सबै यात्रुको जिवन हुन्छ । चालकको एक लापरवाहीले सवारी साधनमा बसेका सबै यात्रुको जिवन खतरमा हुन्छ । चाहे जलयात्रा होस् वा हवाई यात्रा, चाहे सडक यात्रा नै किन नहोस् यात्रुलाई सुरक्षित गन्तब्यमा लैजाने जिम्मेवारी चालकको हो । तर सवारी साधनभरी यात्रु खचाखच छन् चालक भने सवारीवाट अचानक हामफाले भने यात्रुको मनस्थिति र अवस्था कस्तो होला ? कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
← स्वर्गीय अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको दुरुस्तै अभिनय गरेर चर्चामा आएका प्रकाश चन्द काठमाडौँ आएर भेटे दुर्गेश थापालाई.
यी हुन यौ’न सन्तुष्टिका लागि हरेक दम्पतीले जान्नैपर्छ यी ५ कुराहरु… →